Cabdullaahi Xasan Bariise oo digniin adag u diray Alshabaab – idalenews.com
Taliyaha Ciidanka Dambi Baarista ahna Afhayeenka Ciidanka Buliiska Soomaaliyeed Cabdullaahi Xasan Bariise oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Baaritaano ay sameeyen ku soo qabqabteen Rag xiriir la lahaa Al-qaacidada Somalia ee Alshabaab oo uu Taliyaha ku sheegay inay ku dhuumaleysanaayen Gudha Magaaladda.
Cabdullaahi Xasan Bariise waxa kaloo uu sheegay in haatan Al Shabaab ay Maleegayaan qaraxyo iyo dilal qorsheysan in ay Ka fuliyaan Magaalada Muqdisho balse waxa uu sheegay in arrimahaasi oo idil ay ka feejiganyihiin Ciidanka Buliiska. sida uu hadalka u dhigay.
Taliyaha Ciidanka Dambi Baarista ayaa dhanka kale uga digay Alshabaab inay maleegan Qaraxyo ay ka geestan Muqdisho waxa uuna sheegay in Hay’adda Nabadsugida ay Talaabo adag ka qaadi doonto ruuxii ay ku qabtaan isaga oo qarax maleegayo.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in Xukuumadda Somalia ay diyaar u tahay sida ay isaga difaaci lahaayeen weerarada kaga imaanaya dhanka Alshabaab, waxa uuna sheegay inay ka war qabaan in Alshabaab ay Dagaalyahanno Cusub soo galsheen Somalia waxa uuna Tilmaamay inay haatanna doonayaan in ay dib dagaallo uga Huriyaan Caasimadda Somalia. sida uu hadalka u dhigay.
Si kastaba ha ahaatee hadalka Taliyaha ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii dambe Magaaladda Muqdisho ay ka dhacaayen Dilal qorsheysan oo ay geesanaayen Kooxda Alshabaab.